Rostov State Medical University - Study Mbbs na Russia
Rostov State Medical University Nkọwa
City : grilled
tọrọ ntọala : 1918
Students (ihe ruru.) : 7000
Echefukwala atụle Rostov State Medical University
Idebanye aha na Rostov State Medical University
The Rostov State Medical University bụ ndị kasị ibu isi ọzụzụ na nnyocha center na Southern Russia. N'ime 85 afọ nke ịdị adị ya aghọwo a ọgwa na mgbagwoju na 10 ngalaba, Medical College, Agha Ọzụzụ Center na ya Clinic.
Leading na elu dọkịta nke mba anyị kpụrụ ná ndabere nke The Rostov State Medical University ha isi na nkà mmụta sayensị na ụlọ akwụkwọ, tinyere isi site okpono Ọrụ nke Science, Ọrụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị, okpono Dọkịta, Okpono Ọrụ nke Health and Culture, nakwa dị ka ụwa na-aha ndị ọkà mmụta sayensị.
Taa na The Rostov State Medical University na-arụ ọrụ 92 ngalaba, onye kasị nta n'ime ha bụ Department of Medical Iwu. Ihe karịrị narị isii nkụzi na-mgbe niile na-arụ ọrụ na-ewebata innovations na mmekọrịta forms nke mmụta. N'etiti ha, e nwere ihe karịrị 119 Dọkịta nke Science, ọkachamara na banyere 350 PhDs. The academicians na ndị ọkachamara ndị na-arụ ọrụ na anyị University ugbu a ịnọgide na-ịzụlite kacha mma omenala nke ha ụzọ.
The usoro ntụkwasị Education ekewa n'ime ọtụtụ ige. Mgbe University e na-azụ omume maka ndị dọkịta na ọgwụ na ahụ ike na òtù nile nke South of Russia. Kwa afọ banyere 8000 ndị dọkịta na-mmughari na Faculty Training, karịrị 1000 interns na bi - na Faculty of Professional mmughari. Na mgbakwunye, na University nwere a Preparatory ngalaba on Training Foreign Citizens, n'ihi The Rostov State Medical University bụ mba akwụkwọ ahụ a na-azụ ndị nnọchiteanya nke ihe karịrị otu narị mba na agbụrụ nile nke ụwa.
The nkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ na-haziri na achikota site na nkà mmụta sayensị na-eme nnyocha ọrụ na na-emejuputa atumatu n'ime ngalaba na ọmụmụ. The Central Scientific Research Laboratory (CSRL) ọrụ n'ụzọ dị irè, ebe a dịgasị iche iche nke Biochemical, molekụla-mkpụrụ ndụ ihe nketa, morphological, microbiological ọmụmụ na-eje. Anyị nwere The Scientific na Research Institute of Immunology na anyị na-eme atụmatụ nwere The Scientific na Research Institute of Urology na Neurology. The nnyocha sayensị na-eme na 5 isi na nkà mmụta sayensị ntụziaka: ọgwụ na ahụ ike-ndu nsogbu; obibi-ịdị ọcha nsogbu (gburugburu ebe obibi na ahuike) nke ahụ ike ọha nchedo; na nkà mmụta sayensị na ọrụ nhazi maka mgbochi, na ịgwọ ndị inyom, nne na ụmụ taa na-ọrịa; na nkà mmụta sayensị na ọrụ nhazi maka mgbochi, na ịgwọ-awa ahụ ọrịa; na nkà mmụta sayensị na ọrụ nhazi maka mgbochi, na ịgwọ isi esịtidem ọrịa.
Enwere 3 Dissertation Kọmitii maka Ph.D. na doctoral dissertations agbachitere.
The Rostov State Medical University amalite mba na nkà mmụta sayensị imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ mba inyerịta na nkà mmụta sayensị ndị ọrụ, ụmụ akwụkwọ, nkụzi, ukwuu ruru eru ọkachamara na-ekere òkè na mba na nkà mmụta sayensị nzukọ na congresses.
The Clinic nke anyị University bụ a multi-ubi ọgwụ alụmdi, nke nwere obosara ohere nke oge a na-achọpụta ọrịa ọmụmụ na a elu larịị nke dị irè pụrụ iche Consultative, -achọpụta ọrịa na nlekọta ahụ ike ka ndị bi nke Rostov Region ndị ọzọ n'ókèala nke Southern Federal District na Russian Federation. Ọ bụkwa ndị kasị ibu ọzụzụ isi, nke nwere niile ọnọdụ izi usoro iji elu iche-iche na ụzọ nke ọzụzụ na oge a rụzuru na sayensị ọgwụ. Na Clinic ụmụ akwụkwọ nweta mkpa nkà ma mara ihe ndị kasị oge a na ọgwụ na ahụ ike na ngwá.
The Clinic nke RSMU-agụnye 20 inpatient nkeji na 675 akwa (na nsonye 125 ụbọchị na-elekọta akwa), 2 ngalaba nke Anesthesiology na iji tụtee mmadụ, Consultative outpatient Ngalaba, a Dental Department, Medical Ctinye, Ctinye nke Medical Ophthalmology, 13 ọgwụ na ahụ ike-diagnostIC subdivisions, Blood Technology Center. Taa ụlọọgwụ mkpara mejupụtara353 dibịas, na nsonye 11 professors, 28 Dọkịta nke Medical Science na 52 PhDs;karịrị 30 ọrụ nke mahadum bụ isi mpụga ọkachamara na ndị ọkachamara nke Ministry of Health nke Russian Federation na Southern Federal District, Ozi nke Health nke Rostov region na Municipal Council «Health Management na Rostov-on-Don».
Na-adịbeghị anya na centralization na akpaaka nke ọtụtụ achọpụta ọrịa na ọgwụ ngalaba nke anyị University ekwe ka itinye uche na esikwa eji mkpara, ụlọọgwụ, mma ọrụ nke ọ bụla bughi unit na ike a technology nke na-aga n'ihu ọgwụ-achọpụta ọrịa usoro.
The Rectorship-ewepụta akpan akpan mesiri ike na nzukọ nke izi usoro na Mahadum. Naa anyị mejuputa mmekọrịta iche nke ọzụzụ na computerize muta usoro. The kasị mma ọkachamara na dọkịta nke University nwere ohere ata N'ezie nke ụwa na ọgwụ na ahụ ike clinics na mahadum nke Europe.
N'okpuru ịhụ mmezu nke mkpa mba oru ngo «Health» na Administration nke University na-arụsi ọrụ na-emepe emepe na n'ụzọ dị irè na mmejuputa atumatu oge a mmemme nke ọgwụ-elekọta mmadụ ghara ịgbanwe nke ụmụ na-eto eto na ndị bara uru ahụike. N'okpuru ịhụ mmezu nke izi ọrụ nke mkpa mba oru ngo na nọ nke ike na-elekọta ndị dibịa maka Rostov Region na dum Kọkeshịan region na-ọma zụrụ azụ na anyị University.
Faculty of International Mmụta
Faculty of Postgraduate na n'ihu Education;
Faculty of ogba Force Medicine;
na 1915, na Division nke Medicine na Russian Warsaw University a kpaliri Rostov na Don na na anana-ugbu ụbọchị Rostov State Medical University. Ọ na mbụ kpụrụ dị ka a ngalaba na mgbe e mesịrị ghọọ a ọgwụ Institute na 1930. E nwere ihe 295 agụsị dọkịta na mbụ na-agụsị akwụkwọ nke e guzobere ọhụrụ akwụkwọ.
N'ihi na di iche iche na ụmụ akwụkwọ ahụ na-abịa University, ihe award nke Order of Enyi e ọdịda na University na 1980. Na ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ nile nke ụwa na-anọchite anya.
na 1994, na Rostov Medical Institute nke bụ kasị isi ọzụzụ, nnyocha na ọgwụgwọ center Southern Russia e renamed na Rostov Medical University.
Ị chọrọ atụle Rostov State Medical University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Rostov State Medical University na Map
photos: Rostov State Medical University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Rostov State Medical University.
Moscow Ike Engineering Institute Moscow